သင်မြင်နေသောလူသည် TINDER ကိုအသုံးပြုနေဆဲလားဆိုသည်ကိုမည်သို့ပြောရမည်နည်း - သတင်း
သင်မြင်နေသောသူသည် Tinder ကိုအသုံးပြုနေသေးလားဆိုသည်ကိုမည်သို့ပြောရမည်နည်း
သငျသညျမှာ Is ၏ Tinder ဇာတ်လမ်းတွဲနားထောင်ရန်နိုင်?, အဆိုပါ Tab ရဲ့လိင် Podcast တခုကို။ နားထောင်ပါ ပန်းသီး , Spotify , ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဒီမှာအောက်ကကစားသမားအတွက်။
မကြာသေးမီကကျနော့်သူငယ်ချင်းကသူမရဲ့ရည်းစားကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီ uni မှာသွားလည်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူမသူမ၏ရည်းစားတစ်စုံတစ် ဦး ၏ Tinder ပွတ်ဆွဲပေါ်တက်လာခဲ့သည်ကိုကြားပြောလေ၏။ သူကပုံမှန်အသုံးပြုခဲ့သည် အိုးမ, ငါကျိန်းသေ app ကိုဆင်ခြေဖျက်သိမ်း ။ ဒါပေမဲ့ - app ကိုအပေါ်သူ၏တည်နေရာသည်သူ၏သူငယ်ချင်းရဲ့ uni မြို့ဖြစ်ခဲ့သည် ?? သင်မလှုပ်ရှားသည့်အချိန်တွင် Tinder သည်သင်၏တည်နေရာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်သေးသလား။ ဒါမှမဟုတ်ဒီလူတွေလိမ်နေတာလား။ သင်ကြည့်နေသောသူသည်သင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း နေဆဲ Tinder သုံးနိုင်သည် ? သူတို့ရှိမရှိသိရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား ချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်းကို တက်နေဆဲလား
သငျသညျသူတို့၏ကောလာဟလများကြားဖူးတယ်ဆိုရင် ဟုတ်တယ် ပြောင်းလဲနေပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရရှိပါသည် အဲဒီမှာတကယ်မကြာသေးမီကဓာတ်ပုံများ , ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ကောင်းသင်၏အဆွေခင်ပွန်းသူတို့ချင်ပါတယ်ကတိထားတော်သော်လည်းသူတို့ကပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသူတို့အတိတ် swiped သင်ကပြောကြားခဲ့သည် app ကိုဖျက်လိုက်သည် - သင်အဖြေတွေလိုတယ် သို့သော်အမှန်တရားကားအဘယ်နည်း။ ဒါကိုသင်ဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်သလဲ ထိတ်လန့်ပုံပြင်ချိန်းတွေ့?
ဤတွင်တစ်စုံတစ် ဦး သည်တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေပြီး၎င်းတို့၏ Tinder အကောင့်ကိုအသုံးပြုနေခြင်းရှိမရှိသိနိုင်သည့်တိကျသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကတက်ကြွနေပြီး Tinder အသုံးပြုသည်ကိုမည်သို့ပြောရမည်နည်း
သင်ကြည့်နေသောသူသည် Tinder ကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေခြင်းရှိမရှိကိုပြတ်ပြတ်သားသားလေ့လာရန်နည်းလမ်းရှိသည်။ အဖြေမှာအားလုံးဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့တည်နေရာ ။
သငျသညျသဘောပေါက်လာသောအခါသူနေဆဲဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအချိန် Tinder အသုံးပြုနေသည်ရဲ့
လူများကအဖြေကိုသိလိုသည်မှာကြာပြီ Tinder အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏တည်နေရာကိုဆက်လက်ဆက်လက်လျှင် ဒီ app ကပိတ်ထားရင်၊
အဖြေကတော့နေရာကိုမွမ်းမံရန်အတွက်သင် app ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းအတွင်းရှိတည်နေရာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစတင်ရန်ဖြစ်သည်။
သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည် Tinder သည်သင်၏တည်နေရာကိုမည်သို့ဝင်ရောက်နိုင်၊ ပြောင်းလဲနိုင်ပုံ : သင်ဤအက်ပ်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ဖြစ်စေဘယ်တော့မှဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုချိန်ညှိချက်များတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Tinder လုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းမရှိပါ သင့်တည်နေရာကိုကြည့်ပါ အမြဲတမ်း။
Tinder သည်သင်၏တည်နေရာကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပြီးစတင်ပွတ်သပ်သောအခါမှသာသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကိုက်ညီမှုများကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
တိုတိုပြောရရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့တည်နေရာကပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်သူတို့ဟာ app ကိုရောက်နေပြီလေ။
သူတို့ပရိုဖိုင်းပေါ်တွင်ဘာမှမ update ကြပြီမဟုတ်, ဒါသူတို့အွန်လိုင်းမဟုတ်ကြပြီတူသောကြည့်ရှုစေခြင်းငှါပင်လျှင်ဒါ - သင်ဆဲနိုင်ပါတယ် တစ်ယောက်ယောက်ကိုဖမ်းမယ် ။
ဤသည် Tinder ၏တစ်ခုတည်းသောလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါဘူး, app ကိုလည်းတစ် ဦး ရှိပါတယ် လျှို့ဝှက်လိုလားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ သင့်တော်သောလူများအားလုံးကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်အားတားဆီးနိုင်သည်။
• ဤအက်ပ်ကိုသင်ဖျက်သောအခါသင်၏ Tinder ပရိုဖိုင်းတွင်ဤအရာသည်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်
• ရာနှင့်ချီသောပွဲစဉ်များကိုရရှိရန်သင်၏ Tinder ဇီဝတွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့်အတိအကျစကားလုံးများဖြစ်သည်
• စိတ်ပျက်စရာမိန်းကလေးများ Tinder တွင်ယောက်ျားလေးများမလုပ်သင့်သောအရာများ
• Tinder ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ၊ အဲဒါကိုလုပ်ပြီးသွားပြီ